Kana iwe kusvetukira muchitima muna kweBrussels uchawana uri Knokke-Heist kumativi 50 maminitsi Papera. Pano hapana chete, asi 5 mahombekombe anoyevedza kumirira iwe. nzvimbo iyi ine chinhu vose, kusanganisira gorofu, unyanzvi namaberere, mumwe kasino, tsika tsika, uye an zvinoshamisa zvisikwa akadana Zwin. Nezvinhu zvizhinji zvakadaro kuita iri pamahombekombe zororo hwakakodzera achitora.
Izvi kuti pakupedzisira pamhenderekedzo kuenda kuBelgium vamwe mafaro mhuri. Zvakanaka-yaizivikanwa-siyana mvura mitambo akadai Paddling uye kushambira, chikepe nzendo, chaienda, hove, wave carting, uye kufambisa, uyewo dzakawanda kutandara zvivako pamwe pamhenderekedzo uye motokari isina promenade, Nieuwpoort rinopa chinhu wose. guta rino zviri nyore kuwana kubva kweBrussels uye pfupi chitima tasva achawana iwe ikoko.